के अन्डरवर्ल्ड डन दाउदको मृत्यु भएको हो ? « Media for all across the globe
के अन्डरवर्ल्ड डन दाउदको मृत्यु भएको हो ?
अन्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिम केही वर्षदेखि पाकिस्तानमा लुकेर बसेका छन्। उनी भारतीय प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचिका सर्वाधिक खोजिएका अपराधी हुन्। शुक्रवार एक्कासी भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा दाउद र उनकी श्रीमती महजबीन उर्फ जुबीना जरीनको एकाएक मृत्युको खबर फैलियो।
स्रोतको हवाला दिदै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले दाउद र श्रीमती महजबीनको कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएको दाबी गरे। सञ्चारमाध्यममा मृत्युको खबर फैलिएपनि यसको अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। दाउदका भाइ अनीस इब्राहिमले समेत कोरोना संक्रमितका समाचारहरु हल्ला भएको बताएका छन्। यता गुप्तचर एजेन्सीहरूले दाउद र उनकी श्रीमती कोरोना संक्रमित भई पाकिस्तानको कराची अस्पतालमा भर्ना गरिएको जनाएका छन्। एजेन्सीहरूका अनुसार – दाउदका सहयोगीहरु समेत क्वारेन्टाइन बसेका छन्।
अन्डरवर्ल्ड डन दाउदले पाकिस्तानमा शरण लिइरको भारतीय गुप्तचर एजेन्सीको बारम्बार दावा छ। यदपि, पाकिस्तानले यसलाई अस्वीकार गरिरहेको छ। सञ्चारमाध्यमका अनुसार दाउद कराचीमा पाकिस्तानी सेना र आईएसआईको कडा सुरक्षाकाबीच बसिरहेका छन्।
दाउद मार्च ११९९३ को मुम्बई बम बिष्फोटनका मास्टरमाइन्ड हुन्। मुम्बई बिष्फोटनपछि उनी भारतमा छैनन्। खाडी देश र पछिल्लो समय पाकिस्तानमा शरण लिइरहेका छन्।